May 27, 2019 - CeleLove
လက်ထပ် ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဒီလိုလေး ငွေ စုကြည့်ပါ …။
May 27, 2019 Cele Love 0
လက်ထပ် ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဒီလိုလေး ငွေ စုကြည့်ပါ …။ ရည်းစား ဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွား ခဲ့ တာပေါ့ …။ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ် ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် […]
သူ့ရဲ့ ဘ၀အမှန်ကို မိသားစုတွေ သိရှိသွားပြီးနောက် အားလုံးကိုတောင်းပန်ကာ ဘ၀ကိုအရှုံးပေးသွားတဲ့ လူငယ်လေး ကောင်လေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသတ်သေခင် နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့စာလေးပါ… “တောင်းပန်ပါတယ် ပါပါ နဲ့ မေမေ ပါပါနဲ့ မေမေတို့ အမျိုးထဲမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုတာ သားသိပါတယ်. . . သားစိတ်ကိုလည်း အမျိုးမျိုး ပြုပြင်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါမယ့်လည်း အရမ်းပင်ပန်းတယ် […]
သင်ယူလိုက်တဲ့ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး သင်နဲ့ မယူခင် အပျိုစစ်ခဲ့ မစစ်ခဲ့ သိချင်ပါသလား…
သင်ယူလိုက်တဲ့ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး သင်နဲ့ မယူခင် အပျိုစစ်ခဲ့ မစစ်ခဲ့ သိချင်ပါသလား… အမေး – ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက်၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။ ကျမတို့ မိန်းကလေး သဘာဝအရ ယောက်ျားလေးနဲ့ စပြီး နေတဲ့နေ့မှာ သွေးကျရမယ်လို့ ကျမအမျိူးသားက […]
အနုပညာကို ဘန်းပြပြီး ဖာခံစားနေတဲ့ဟာမလို့ အယ်မကြီးက သင်းသင်းကို ဝုန်းပြီ ဗီဒီယိုဖိုင် အနုပညာကို ဘန်းပြပြီး ဖာခံစားနေတဲ့ဟာမလို့ အယ်မကြီးက သင်းသင်းကို ဝုန်းပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်အနုပညာကို ဘန်းပြပြီး ဖာခံစားနေတဲ့ဟာမလို့ အယ်မကြီးက သင်းသင်းကို ဝုန်းပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်အနုပညာကို ဘန်းပြပြီး ဖာခံစားနေတဲ့ဟာမလို့ အယ်မကြီးက သင်းသင်းကို ဝုန်းနေပီ […]
ချစ်သူကိုချစ်လွန်းလို့ ဓားနဲ့အဆပေါင်းများစွာထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်မိန်းကလေး
ချစ်သူကိုချစ်လွန်းလို့ ဓားနဲ့အဆပေါင်းများစွာထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်မိန်းကလေး Yuka Takaoka အမည်ရှိ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဂျပန်မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ သူမနေထိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးမှာ အသိမိတ်ဆွေ ယောင်္ကျားသားတစ်ဦးကို ဓားနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးနှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေး မေလ ၂၃ ရက်နေ့၊ ညနေ ၄ နာရီအချိန်မှာ […]
မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာဝန်က ငှက်ဖျားဆေးတွေ သောက်ခိုင်းနေတဲ့ လူနာကို ဘန်ကောက်ဆေးရုံသို့ပို့လိုက်သောအခါ
မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာဝန်က ငှက်ဖျားဆေးတွေ သောက်ခိုင်းနေတဲ့ လူနာကို ဘန်ကောက်ဆေးရုံသို့ပို့လိုက်သောအခါ သေရွာပြန်ငကျော်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား..အံ့မခန်းလိလိပါဘဲ.. လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ကျမ္မာရေးထိခိုက်လာပြီး သေဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ မှီရာကိုလက်လှမ်းမှီသလောက်လှမ်းဆွဲတတ်ကြပါတယ်…ငွေဘယ်လောက်ကြီးဘဲရှိရှိ မကျမ္မာခြင်းရဲ့ဝေဒနာတွေကို မည်သူမှကြည်ကြည်ဖြူဖြူမခံစားချင်ကြပါဘူး ..ဒါ..လူ့သဘာဝဘဲ. ….. မှန်ပါတယ်…ငကျော်ဟာ စားမဝင်အ်ပ်မပျော် ဆီးမမှန်ဝမ်းမမှန်နဲ့ ၄ လလောက် နေ့စဉ် 🥵 Fever တွေတက်ပြီး […]
ဇနီးကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန် ယောက္ခမအားဓားဖြင့်ထောက်၍ သားမယားပြုကျင့်တဲ့ သားမက် မန္တလေးတိ်ုင်းဒေသကြီး ဝမ်းတွင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် ၂၀၁၉ မေ ၂၅ရက် ညနေ ၅နာရီအချိန်ခန့်က အလိုမတူသားမယားပြုကျင့်၍ အရေးယူရေးပါရန်တိုင်တန်းမှု့ဖြစ်ပွားခဲ့သည် …. ။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါ်—– (၅၃)နှစ် လိန်ပင်ကျေးရွာ ဝမ်းတွင်းမြို့နေသူသည် လွန်ခဲ့သော (၁)နှစ်ခန့်က ၎င်း၏ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားသဖြင့် နေအိမ်တွင် သမီးဖြစ်သူနှင့် […]
သူများနိုင်ငံမှာ သွားတဲ့သူတိုင်း ဘယ်တော့မှ အထင်မကြီးဘူး..ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ကြမ်းကုန်ပြီ သူများနိုင်ငံမှာ သွားတဲ့သူတိုင်း ဘယ်တော့မှ အထင်မကြီးဘူး..ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ကြမ်းကုန်ပါပြီနော်….. လက်ရှိနိုင်ငံခြား မှာရောက်ရှိနေတဲ့ အောင်ချမ်းအေးကို တော့ ပရိတ်သတ် အားလုံး သိပြီး သား ဖြစ်မှာပါ နော် … သူကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ […]
ဘုန်းမင်းနေလနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဟန်လေးး
ဘုန်းမင်းနေလနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဟန်လေးး သရုပ်ဆောင်ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ သားချောလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ အကယ်ဒမီရွှေကြိုမှာ လူသိများလာခဲ့တဲ့ ဘုန်းမင်းနေလဟာ မော်ဒယ်ဟန်လေးနဲ့ ချစ်ကြိုးတွေသွယ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် …။ ဘုန်းမင်းနေလဟာ ချစ်သူဖြစ်သူကို official ချပြချင်မျိုးတော့မရှိသေးဖူး။၂၀၁၉ သင်္ကြန်မှာလည်း ချစ်သူဖြစ်သူနဲ့ မဏ္ဏပ်မှာကဲနေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့လဲ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလဟာ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်များစွာကိုလည်း […]
ဒီလိုရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေ ကြုံလာရင် မကြာခင်မှာ သင့်ဆီ ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာတော့မှာပါ
ဒီလိုရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေ ကြုံလာရင် မကြာခင်မှာ သင့်ဆီ ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာတော့မှာပါ မကြာခင်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေ သင့်ဆီကို ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..? ကံကောင်းခြင်းတွေကို ကိုယ့်ဆီကို ရောက်လာတော့မယ် ဆိုတာကို ရှေ့ပြေးနိမိတ် သင်္ကေတတွေက တစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ် …. ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာေ တာ့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်ကင်္ကေတတွေနဲ့ […]